सानो तर शक्तिशाली: डचटाउनमा बिक्रीको लागि • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
सानो तर शक्तिशाली: डचटाउनमा बिक्रीको लागि
प्रकाशित अक्टोबर 31st, 2021
आफ्नो कल गर्न आरामदायक ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ? डचटाउनमा बस-सही मूल्यमा तपाईंको सही-दायाँ आकारको ठाउँ खोज्नुहोस्! हाम्रो छिमेकले दृढतापूर्वक निर्मित ऐतिहासिक आवास, सुविधाजनक स्थान, मित्रवत छिमेकीहरू, र रोमाञ्चक भविष्यको साथ तपाईंको पैसाको लागि सबैभन्दा ब्यांग प्रदान गर्दछ।
तल Zillow मा सामान्य मूल्य र मामूली आकारका घरहरूको लागि हाल सक्रिय सूचीहरू मध्ये केही छन्। तर डचटाउनमा सबैको लागि केहि छ! चाहे तपाईं केहि सानो वा ठूलो खोज्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो छिमेकमा सूचीहरू ब्राउज गर्न निश्चित गर्नुहोस् र डचटाउनलाई के उत्कृष्ट बनाउँछ सिक्नुहोस्.
यो क्लासिक ईंट घरले एउटा सानो प्याकेजमा धेरै प्रस्ताव गर्दछ। तपाईंले तीन शयनकक्षहरू र दुई पूर्ण नुहाउने ठाउँहरू पाउनुहुनेछ, खुला फ्लोर योजनाहरू र राम्रोसँग समाप्त तहखानेको लागि आँखा भेट्ने भन्दा बढी ठाउँको साथ। साथै तपाईं मेरामेकको साथ डाउनटाउन डचटाउनमा पसलहरू र रेस्टुरेन्टहरूबाट केही कदम टाढा हुनुहुन्छ।
$ 139,900 Zillow मा हेर्नुहोस्
वास्तुकलाको रूपमा आश्चर्यजनक, यो सानो तर भव्य दुई शयनकक्ष / एउटा बाथरूम घरले धेरै मौलिक मिलवर्क, पकेट ढोका, उच्च छत, र पछाडिको ठूलो डेक सुविधा दिन्छ।
$ 115,000 Zillow मा हेर्नुहोस्
यो दुई शयनकक्ष / दुई बाथरूम बंगलामा ग्रान्डको पश्चिममा ऐतिहासिक र आधुनिक संयोजन खोज्नुहोस्। हार्डवुड फर्श, दाग गिलास झ्यालहरू, र सजावटी फायरप्लेसले पुरानो संसारको आकर्षण ल्याउँदछ, जबकि पातलो नयाँ भान्छाले सुविधा र कार्यक्षमता प्रदान गर्दछ। यस घरले आंशिक रूपमा समाप्त तहखाने र ठूलो आकारको एक-कार ग्यारेज सुविधा दिन्छ।
$ 159,900 Zillow मा हेर्नुहोस्
यो उज्यालो र हर्षित दुई ओछ्यान / दुई स्नान गृहलाई सजावटी फायरप्लेस, पकेट ढोका, मूल काठको काम, र थप सुविधा सहित हेर्नुहोस्। त्यहाँ पछाडि एउटा ठूलो डेक पनि छ जुन एक घेरा लगाइएको घरपछाडि जान्छ।
$ 110,000 Zillow मा हेर्नुहोस्
यो तीन शयनकक्ष / एउटा बाथरूम घरमा एक सुन्दर सजावटी फायरप्लेस र बैठक कोठा र औपचारिक भोजन कोठा अलग गर्ने बिल्ट-इन क्याबिनेटहरू, साथै बुचर ब्लक काउन्टरटपहरू र बाथरूममा जेट टबको साथ एक पातलो आधुनिक भान्छा रहेको छ।
लिस्टिंग मूल्यहरु प्रकाशन को समय को रूप मा सही छन्। विवरण तथ्या and्क र Zillow को माध्यम बाट लिस्टिंग एजेन्टहरु द्वारा प्रदान गरीएको आंकडा मा आधारित छन्। माथिको लिस्टिंग जानकारी को उद्देश्य को लागी मात्र प्रदान गरीएको हो। हामी DutchtownSTL.org मा अचल सम्पत्ति पेशेवरहरु छैनन् these यी लिस्टिंग को पूर्ण विवरण को लागी एक एजेन्ट लाई सम्पर्क गर्न को लागी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
तल दायर गरिएको रियल एस्टेट. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. डचटाउन र रियल एस्टेट. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अक्टोबर 31st, 2021 .
डचटाउन STL.org रियल एस्टेट सानो तर शक्तिशाली: डचटाउनमा बिक्रीको लागि